GERMANY VS BRAZIL: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
GERMANY VS BRAZIL: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
(Berlin) 27 Maarso 2018 – Germany iyo Brazil ayaa caawa foolka isku diiraya gegada Olympia Stadium ee magaalada Berlin, ciyaar ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan todobaadkan.
Thomas Muller iyo Mesut Ozil oo aan la soconin xulka ayaa waxaa boosaskooda buuxinaya labada reer Manchester City ee Ilkay Gundogan iyo Leroy Sane. Waxaa soo laabanaya Emre Can. Halka uu sidoo kale safka hore ku jiro Marvin Plattenhardt oo caawa u safan Die Mannschaft.
Waxaa la wada ogyahay inuu Neymar maqan yahay, sidaa darteed Douglas Costa ayay caddahay inuu caawa safanayo. Willian ayaa isna safan doona kaddib markii shaxda la beddeley oo Philipe Coutinho weerarka dhexe la geeyay.
Shaxda suurtagalka ah ee Germany (4-3-3)
Plattenhardt (LB), Boateng (LCB), Hummels (RCB), Kimmich (RB)
Kroos (LCM), Weigl (CDM), Gundogan (RCM)
Draxler (LW), Werner (ST), Sane (RW)
Shaxda suurtagalka ah ee Brazil (4-2-3-1)
Marcelo (LB), Marquinhos (LCB), Miranda (RCB), Alves (RB)
Casemiro (CDM), Paulinho (CM)
D.Costa (LM), Coutinho (CAM), Willian (RM)
Wakiilka Maxamed Saalax oo Wadanaha Jaray Taageerayaasha Liverpool!!!!